Safaarada Maraykanka oo si toosa faraha ugula jirta qaska wadanka: WARBIXIN - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Safaarada Maraykanka oo si toosa faraha ugula jirta qaska wadanka: WARBIXIN
Safaarada Maraykanka ee Soomaaliya ee xarunteedu tahay Xalane ayaa si toosa u qasaysa dalka. Qoraal ay soo saareen ayay ku amaaneen aqalka xaaraanta ee lagu cuno xoolaha masaakiinta ee lagu magacaabo aqalka sare.
Ajaanibta qaska ka wada dalka ayaa samaystey meelo ay ka soo galaan siyaasada dalka waxana ka mida maamul jufeedyada la sameeyay laakiin welli dawladu aqoonsanin.
“Waxa socota lacag waalan oo la siinayo xildhibaano ku sheega ku jira qaar ka mida golaha shacabka oo la rabo in wax loogu dhimo amniga Muqdisho ayuu yiri xildhibaan lacagta loo soo bandhigey oo diidey inuu magaciisa sheego.
Waa la ii soo bandhigey lacagtaa waalan laakiin anigu waxaan ahay qof Ilaah ku xiran marnaba madaxda I aamintey dabada Ka toogan maayo qasina maayo amniga dalka ayuu raaciyay.
Dadka lacagtaas waalan loo direy waxa ku jira horjoogaha Hirshabeele oo hadda dabada u rogey madaxda qaranka ayagoo ka tuuri kara xilka.
Maraykanka ayaa Raba in nidaamkiisa federaal iyo Kan aqalka sare lagu dabaqo dalka si dalku dhaqaale ahaan dhulka u sii galo maadaama dalku qaadi karin lacago farabadan oo fadhiga lagu cuno, wuxuuna dabada ku hayaa oo taageero siiyaa kuwa sheegta federaal ayaan rabnaa laakiin haddana u fasirta sidey rabaan.
Madaxda hadda jirta ayaa soo celiyay sharsftii dalku lahaa intey awoodeen waxase safaaradu u xadhko xiratey inay boqno gooyaan, ayagoo keliya qasaya amniga dalka ayuu yiri xildhibaanka.
Go’aanka sidey u dhacayso doorasho waxa iska leh dawlada dhexe iyo golaha shacabka, waxana qaska aan meel gaarayn horkacaya safaarada Maraykanka oo rabta inay hadda la wareegto hogaanka doorashadu.
Waxa la amrey madaxda qaranka inay maamulka fadhiidka ee dadkiisii naceen ee lagu Kala tagey sheekada goosadka ee Muuse Biixi ay sumcad saxaafadeed u sameeyeen, ayagoo ku kulmaya Jabuuti Isla markaana fulinaya shuruuda Muuse Biixi ee ah in aan nin reer Woqooyi ka imaanin dawlada dhexe. Waqti Lumia IGA dheh.